ACTINIDIA: SIFOOYINKA BEERASHADA IYO DARYEELKA EE DACHA - DALAGYADA MIRAHA
Geedka geedka canjiga ah ee looxa ah wuxuu soo jiidan karaa midhaha dhadhan fiican leh oo leh waxyaabo sarreeya oo ascorbic acid ah, oo aan qabyo ahayn (beeritaanka iyo daryeellada maaha mid adag), muddo dheer (ilaa 40 sano). Suunka kuleylka leh qaboobaha qaboobaha iyo qaboobaha qabow, noocyo badan oo beerta jimicsi ah (colomikta, argagax, xaglo badan, midab, iwm.) Ayaa si guul leh u qaaday saldhigga.
Ma taqaanaa? Magaca "Actinidia" wuxuu ka yimid Giriigga. Ακτινιδιον - beam. Actinidia waxaa markii ugu horeysay lagu sharraxay Lindley 1835, sannadkii 1905 geedka waxaa lagu beeray New Zealand, midhahaasna waxaa loo yaqaan "Kiwi" oo sharaf leh shimbirta New Zealand. I. Michurin tan iyo 1909-kii ayaa si firfircoon ugu hawlanaa taranka haweenka ee actinidia.
Geedo geedo ah ee actinidia
Haddii aad go'aansato inaad soo saarto actinidia on aad sawirka, ka dibna sprouts laga helo goynta waa in la isticmaalo (actinidia koray ka soo miraha lumiyo astaamaha kala duwan). Waxaad kori kartaa geedo naftaada, waxaadna ka iibsan kartaa dukaanka khaaska ah. Marka aad iibsaneyso geedo of actinidia, laba waxyaabood waa in la tixgeliyaa:
Sidee loo baxsaday (haddii caleemaha ka soo baxo burooyinkeeda - waxaa laga helaa abuurka, haddii jirid gaaban oo caleemaha dhinaca - caleemaha waxaa laga helaa faafin laga soo jarayo).
Galmadee waa geedka (actinidia - dhaqanka diimeed, sidaas darteed fruiting waa lagama maarmaan in la iibsado geedo labadaba).
Waa muhiim! Helitaanka geedo of actinidia waa in ay fiiro gaar ah u xididada - waa in la xiro (dhulka, polyetylen, weel gaar ah). Iftiinka qorraxda, kulaylka, hawada qallalan waxay dhaawici kartaa geedka. Da'da ugu fiicnaanta dhalashada waa wax aan ka badnayn saddex sano (dhirta "dadka" qaangaarka ah "waa kuwo aan u dulqaadanaynin transplanting). Dabaqa dhirta waxaa lagu aqoonsan karaa kaliya ubax. Dhirta gooyaa waxay dhaxlaan dabaqa dhirta deeqda, sidaas darteed waxaa lagula talinayaa in ay soo iibsato geedo dhintay.
Kala-noolaanshaha actinidia waxay ku xirantahay inta badan xilliga beerto. Bannaanka u dhaxeeya waxaa jira mid mideysan oo ku saabsan arrinka ugu wanaagsan ee waqtiga. Waxaa jira dhowr doorasho:
guga hore, ka hor inta aan casiirka bilaabin inuu guuro;
dhammaadka Abriil - bilowga xagaaga (kadib dhammaadka ubax);
dayrta (ugu yaraan laba - saddex toddobaad ka hor bilawga dhaxan).
Actinidia waxay door bidaa carrada acidic iyo waxoogaa acidic ah (pH = 4 - 5), laakiin si fiican u koraan on dhexdhexaad ah (leh bacriminta wanaagsan). Carruurta dhoobada ugu yar ee ku habboon heerarka biyaha sare. Shuruud lagama maarmaanka u ah koritaanka guuleysta waa in carrada loogu talagalay actinidia waa in ay lahaato dheecaan wanaagsan. Waxaa lagula talinayaa in dhirta lagu beero aagag sareeya oo biyo nadiif ah.
Markaad beeritaanka ka sameysid actinidia (laba asbuuc), waxaad u baahan tahay inaad diyaariso godadka dhulka (marka derbiyada lagu qurxiyo - daboolka):
0.5 m - qiyaasta, dhererka, dhererka (dhererka xoqista wuxuu ku xiran yahay dhererka derbiga);
dheecaan (chips lebbiska, dhagaxyada);
Dheecaan ka soo baxa - ciidda la jilciyey (humus (baaldi), dhuxul (50 gr), superphosphate (250 gr.).
Ka dib markii ay roobabkii ciidda, inta lagu guda jiro beerto geedo iyo ka dib waa inay buuxiyaan dhulka caadiga ah.
Kuwa horay u fiican iyo deriska ah ee actinidia
Ugu-xigeenka ugu fiican waa currant madow (waxay u furmaysaa ciidda, ma dhicin). Doorashada "deriska" sababtoo ah faa'iido u lahaanshaha warshadda for actinidia. Saameyn faa'iido leh ayaa bixiya:
digiraha - digirta, digirta, digirta (kor u qaada ciidda, ilaalinta dheelitirka qoyaanka la rabo, hagaajinta mikroclimate);
currant madow, filbert;
ubaxa - petunia, gerbera, calendula, aster, iwm (ha qalajin ciidda, qurxin).
Dhibaatooyinka xun waxaa la damaanad qaadaa marka ay soo socdaan:
geedo waaweyn oo geedo waaweyn (gaar ahaan dhirta tufaaxa). Geedaha leh xididdadiisa ay qallalaan ciidda. Qodobka wareegga xeegadu wuxuu khatar u yahay xididdada actinidia. Warshad lagu sharraxay waxay kici kartaa tobanaan mitir oo kor u kaca oo geedo lagu xidho, taas oo adkaynaysa in la soo ururiyo miraha;
geedo midho dhalinyaro ah (waxaa laga yaabaa inay u dhintaan "qabatooyinka" ee lianas).
Waa muhiim! Actinidia waxay u baahan tahay in la qubo ka hor inta aysan gaadhin da'da 3 sano (iftiinka qorraxdu wuxuu keeni karaa gubasho nidaamka xididka iyo afkoda).
Qalitaan sax ah
Ka hor inta beerto, geedo of actinidia waxaa loo diyaariyaa sida soo socota: caleemaha qalalan ama jabay, xididdada waxaa lagu rusheeyey mash a dhoobo ah, barkiis oo biyo ah ayaa lagu shubay god.
Qoorta xididku waa inuu dhulka ku yaallaa. Waxaa lagama maarmaan ah in la hubiyo in aan hannaanka hannaanka la aasaasay, in dhulka la tumo waxoogaa yar iyo in la gooyo arrimo dabiici ah.
Wixii fruiting ee saddexda dhirta dhedig kasta waa inay ahaato mid lab ah. Masaafada u dhexaysa geedo marka la beerto - ugu yaraan hal mitir iyo badh. Marka la dhameeyo beeritaanka, waxaa lagama maarmaan ah in biyaha lagu dhajiyo 2 - 3 baaldiyo biyo ah oo leh meel qumman oo toos ah oo leh faashad, warqad, iwm.
Ma taqaanaa? Waa suurtagal in la go'aamiyo meesha dhedigeedu yahay, iyo halka ragga ay suurtagal tahay midabka midabada ee actinidia: haddii dhexda ubaxa ah uu jiro ugxan cad oo leh dhaleeceyn cad oo ay tahay gabar dumar ah, haddii ugxan-haweenku ku wareegsan yahay stamens, waa shakhsi lab ah.
Asaasiga Actinidia Care
Beerto habboon iyo maqnaanshaha dhammaystiran ee cayayaanka ayaa u sahlaya daryeelka falgalinimada. Si koritaanka wanaagsan ee warshadda iyo kordhinta bacriminta, waxaa lagugula talinayaa inaad ku siiso taageerooyinka - trellis (xarigga galvanized ee ka dhexeeya miiska).
Waa muhiim! Gooyn la beeray oo ka soo jeeda actinidia lignified lama gaari karo ugu yaraan laba sano - nidaamka xididkooda waa in la xoojiyaa.
Waraabinta actinidia - dhexdhexaad ah. Qoyaanka dheeraadka ah waa in aan loo oggolaan (tilmaameedu waa dhulalka xididada). Dhammaan actinidia sida caleemaha buufin leh boodh biyo (subax iyo fiidkii).
Bacriminta waxaa lagu doortaa sida ay u kala jecelyihiin dhirta (carrada yar acidic iyo acidic) - chloride potassium, ammonium sulfate, amooniyam amooniyam, ash xaabada, iwm. Chlorine-ka kooban Bacriminta waxaa si adag u xakameyn, sida lime iyo digada cusub.
Ka hor inta quudinta actinidia guga, ka dib barafka dhalaalayaa, waxaa lagama maarmaan ah in si tartiib ah loo dabciyo dhulka ku dhow xididada (3-5 cm). Digidda waa wax aan macquul ahayn - waad dhaawici kartaa xididada. Quudinta waa lagama maarmaan:
guga hore (waxay mulch la leh arrinta organic iyo bacriminta - for mitir kasta laba jibbaaran - 35 garaam oo nitrogen, 20 garaam oo fosfate ama Bacriminta potash);
dhexe - dhammaadka guga (formation of ugxan) (15-20 garaam oo nitrogen ah, 10 garaam oo ah phosphate iyo 10 garaam oo dhadhan ah dhirta halkii square). Xilliga xagaaga waxaad u baahan tahay inaad si joogto ah ula socoto qoorta xididka, buuxi dhulka marka uu soo baxo;
dhammaadka beergooyska, ka hor xilliga qaboobaha. Abuurayaasha waxaa lagu bacrimiyaa superphosphate iyo chloride potassium. Xididdada waxaa lagu daraa lakabka miraha iyo caleemaha.
Waa muhiim! Actinidia waxaa mararka qaar saameyn ku leh caleenta caleenta iyo kalluunka miro-cawlan. Dhirta yaryar (caleemaha iyo gaar ahaan xididdada) waa la cuni karaa bisadaha. Wixii ilaalinta ee xididdada, sprouts beeray waxaa lagu xiraa mesh bir birta ah.
Sidee loo gooyaa
Daryeelka Actinidia wuxuu ku lug leeyahay manjooyin joogto ah.. Gooyo waa lagama maarmaanka u ah liana dhalinyaro (si ay u habboonaato) iyo warshad qaangaar ah (kobaca joogtada ah ee liana waxay keenaysaa in ay sii dheeraato, madoobaato, iyo wax soo saar hoose).
Markaad qorsheynayso manjooyin, tixgeli kuwan soo socda:
Waqtiga ugu wanaagsan ee nidaamka waa bilaha xagaaga, isla markiiba ka dib marka la dhammeeyo ubax;
xilliga deyrta, qiyaastii bil ka hor dhaxan (xilliyada dhaxan waxay ku kala duwanaan karaan gobollo kala duwan) - manjooyin laguma talin (uurjiifyo iyo caleemaha dhalinyarada ma daadin doono iyo dhaxan iyaga ayaa dilaya). Gobollada koonfureed, manjooyin nadaafadeed ayaa la qabtaa dhammaadka dhicitaanka caleen;
guga hore (marka casiirku u socdo geedka canabka ah) manjooyin waa la mamnuucay - xadgudub kasta oo ka mid ah sharafka geedka ayaa waxa uu la mid yahay dhimashadiisa.
Waa muhiim! Noocyada kala duwan ee actinidia waxay leedahay sifooyin gaar ah oo u baahan in la tixgeliyo marka la qorayo. Tusaale ahaan, colomikt ka weyn 8 sanno jir ayaa soo saaraa hal laan oo jir ah waxaana lagu bedelaa jir dhalinyaro ah. Kolomikt qaab ah baadiyaha si fiican u dhali midab leh mana u baahan yahay trellis. In argagaxa, geedka canabka ah ee ugu muhiimsan waa noloshu, laakiin waa in lagu yareeyo si xoogan oo gaaban oo gaaban (caleemaha gaaban oo midho u dhala), iwm.
Xakameynta actinidia yaryar ayaa la xiriirta abuurka. Marka su'aasha la xalliyo - meesha laga gooyo actinidia, waa inaad tixgelisaa sida ay u korayaan. Xasaasiyadda, qaabka maskaxda ee ugu caamsan waa:
sanadka koowaad - gooyaa qaybta anteenada, oo ka tagta 2 - 3 burooyinkeeda;
sanadka labaad - iska jar dhammaan caleemaha, marka laga reebo 2 - 4 qoto dheer (gacmo). Kadib dhammaadka dayrta caleenta, burooyinkeeda dabiiciga ah waa la jaraa;
sannadka saddexaad - caleemaha dhinaca ugu xooggan ayaa la doortaa oo ku xiran yahay trellis bidix iyo midig;
sannadka afaraad iyo shanaad - qoryaha dheeraadka ah ee lafaha ugu xoog badan iyo kuwa miro-dhalaya, manjooyin daciif ah, dhuuban, jaban oo aan dhicin.
Dhirta qaangaarka ah (laga bilaabo min 8 sano jir), manjooyin dib-u-nooleyn ayaa la sameyn karaa saddex ilaa afar sano - geedka canabka ah waxaa lagu duraa heerkul dhan 30 - 40 cm.
Hardiness jiilaalka of actinidia
Noocyada Actinidia ee koray caarooyinkayaga waxay leeyihiin cilad diimeed oo sarreeya (colomicta waxay u dulqaadan kartaa barafka ilaa -35 ... -45 digrii ° C). 2 - 3 sano ee ugu horreeya ee nolosha dhirta dhalinyarada xilliga jiilaalka ayaa ka wanaagsan in lagu daboolo barkad caleemo ah, laasto geedo ama polietene.
Ma aha heerkulka qaboobaha xilliga qaboobaha ee ugu khatarsan ee canabkiinna, laakiin miraha guga (caleemaha dhalinyarada ee actinidia, burooyinkeeda ubaxa iyo burooyinkeeda ayaa ugu nugul iyaga). Hoos u dhigidda heerkulka ka hooseeya eber illaa 8 digrii waxay burburin kartaa biqil dhalinyaro ah.
Beeridda aaladaha loo yaqaan 'actinidia' meel u dhow dhismaha hoyga ayaa qayb ahaan ka dhigaysa khatarta cayayaanka, laakiin dhibaatadu waxay ka iman kartaa socodka biyaha roobka oo ka soo daata saqafka.
Actinidia waxay keenaysaa miraha ugu horreeya si ay u gaaraan seddex ilaa afar sano jir. Geedaha todoba sano jirka ah iyo midda ka sii weyn ee miro-dhalis ah (hal actinidia ayaa soo saari kara 12 ilaa 60 kg oo dalagga ah). Goynta waxay bilaabmaysaa dhammaadka bisha Agoosto waxayna sii socotaa ilaa dhaxan.
Muddada Bisaylka ee berry ee noocyo kala duwan ee actinidia ma aha isku mid:
kolomikta - badhtamaha bisha Agoosto (miraha waxay u bislaadaan si aan caadi aheyn oo qaar ka mid ah ay u dhici karaan dhulka). Khudradda cagaaran waxay daadi kartaa kuleylka ka dib marka laga saaro geedka canabka ah. Gaadiidka iyo kaydinta, waxay u fiicantahay inaad qaadato miro yar oo cagaaran;
argagix iyo Girgalda - bilowga Sebtembar (waxay helayaan midab cagaaran oo dhalaalaya oo jilicsan);
halbowlaha - Sebtember (midabka berry - laga bilaabo huruud illaa orange);
guduud - dhammaadkii Sebtembar (berry ah lama duubo, dhar guduudan).
Miraha cusub ayaa ugu fiican si fiican loogu hayaa, qolal hawo wanaagsan leh (waxay si adag u nuugaan urta).
Ma taqaanaa? One actinidia berry waxay bixisaa baahida aadanaha ee fitamiin C maalintii. Berry cagaaran wuxuu ku jiraa 4 jeer ka badan vitamin C ka badan currants madow iyo 13 jeer ka badan liin. In geedi socodka actinidia berry oo dhan fitamiino iyo walxo firfircoon ayaa ilaaliya. Pectin ee actinidia berry ayaa si firfircoon uga saaraya cusbada birta culus iyo raadiyaal shucaac ah oo jirka ka yimaada jirka.
Berry Actinidia waxaa lagu kaydiyaa:
la qaboojiyey (maydka dhaq, tirtir iyo qaboojiyaha);
qalajiyey (maydheen oo la qalajiyey foornada (55 darajo);
sida macaanka ceeriin (cawska dhulka leh sonkorta - 2 illaa 3);
oo la qalajiyey (berry oo la maydiyay sharoobada kulul, kululeyn 7 daqiiqo, sharoobada ayaa la miiray, berry ayaa la qalajiyey foornada ilaa 15 daqiiqadood 80 darajo.
Dhiirrigelinta actinidia waa mid sahlan. Abuurista daaqa waxay leedahay faa'iidooyin - waxay soo bandhigaysaa dabeecadaha kala duwan, jinsiga, iyo fruiting sannadkii 3aad - 4aad. Daabacaadda abuurka ayaa fursad u helaya in ay helaan geedo badan oo adag, laakin fruiting - laga bilaabo da'da 7 sano.
Faafinta by farcankiisa xidid waxaa laga codsadaa actinidia ee polygam iyo colomicta.
Ma taqaanaa? Dhiirrigelinta xayawaannada aasaasiga ah ee argagaxa ah waa wax aan macquul ahayn - asalka jiilalka noocaani maaha.
Cinjir cagaaran iyo lignified
Qeexida hababka loo kobciyo daaqsinka ah ee actinidia, mid waa in uu ku bilowdaa ugu dhaqsaha badan uguna badan yahay - xoqitaanka. Nidaamkani wuxuu kuu ogolaanayaa inaad dhaxasho astaamaha kala duwan iyo inaad hesho geedo farabadan. Isticmaalay laba doorasho - gooyn cagaaran iyo lignified.
Gooyn Green (qaybta sare ee biqil ka 10 ilaa 15 cm) waxaa la keydiyaa dabayaaqadii May - horraantii June (marka ubax ku dhammaado): jarida laba - saddex burooyinkeeda iyo internodes. Qeybta ugu hooseysa ee jirida waa inay lahaataa 45 °, korka - toosan. Gawaarida:
waxay ku beeri doonaan rooting ah ceelka dhulka leh substrate (dheecaan, 10 cm oo ah isku dar ah humus leh ciid iyo 5 cm of ciid webiga), waxaa lagu hayaa filim, laba jeer maalintii buufiyaa;
30 maalmood kadib markii ay bilaabaan hawada, laga billaabo bisha Agoosto waxay u furan yihiin habeenkii;
xilliga jiilaalka, waxay ku daboolan yihiin barkad caleemo ah, guga - iyaga ayaa loo tallaalay.
Gooynta lignified (dhererka - 20 cm) ayaa la goostay dayrta oo lagu hayaa rucubo ciid ah ilaa guga (qumman), ka dibna lagu beeray aqalka dhirta lagu koriyo. Heerka dillaaca ee gooynta noocan oo kale ah ayaa ka hooseeya kuwa cagaaran.
Si loo kordhiyo tilmaamahan, habka loo xirxiray waxaa loo isticmaalaa (bil ka hor beerashada, gooynta waxaa la dhigayaa barafka oo leh meelo sare oo xiran - horumarinta burooyinkeeda ayaa istaagaya Qaybaha hoose waxay diirran yihiin 30 maalmood kadib markaad googoosto ayaa lagu beeray dhulka banaan).
Qaybinta duurka ayaa si dhif u ah loo isticmaalo sirqoollada guryaha sida habka dhalida ee actinidia, laakiin haddii uu jiro warshad baadiyaha ah goobta (waxay ku koreysaa carrada saboolka ah, dhibsaday miraayad, aan taageero, iwm). Xoortay ayaa loo kala qaybiyaa kadib caleen dayrta ka hor ama horaan gu'ga ka hor dhaqdhaqaaqa casiirka. Qayb kasta oo ka mid ah baadiyaha kala qaybsan waa inay qaadaan afkoda iyo xididdada isku mar.
Nidaamka faafinta adoo dhigaya waa mid sahlan oo wax ku ool ah. Under the liana ay qodeen grooves (7-10 cm qoto dheer), ciidda ee grooves waa mulched leh humus, peat, sida balka.
Daryeelka actinidia inta lagu jiro taranta gaasta guga waxaa ka mid ah in la geliyo sanduuqyada caleemaha hoose ee yar yar, iyaga oo hagaajinaya, u huraya carrada iyo waraabinta joogtada ah. Dusha sare ee caleemaha ayaa ka sarreeya dhulka. Layers ayaa kala soocaya sanadka soo socda.
Actinidia laga bilaabo abuurka Gagaab ah oo adag. Sidaa daraadeed, si ay si dhaqso ah u dedejiso geeddi-socodkan, ku dabool habka looxa dhejinta:
miraha la dhaqay oo la qalajiyey waa in lagu dhejiyaa kabacdi oo lagu qooyay biyo 4 maalmood, ka dibna lagu aasay ciid (sanduuq);
sanduuq si aad u ilaaliso diirimaad 2 bilood, ciid caleenta. Toddobaadkiiba hal mar 5 daqiiqo oo ciid ah si aad u hesho abuurka hawada;
ka dib, sanduuqa sanduuqa waa in lagu duuduubaa maro oo lagu hayaa jidka 2 bilood;
Marxaladda soo socota, miraha waxaa lagu meeleeyaa meel qabow (oo aan ka badnayn + 12 ° C), oo la waraabiyey oo la duubay toddobaadkii hal mar. 20-25 maalmood ka dib, dillaacdoodii waxay bilaabmaysaa;
Waxa ay ku jirtaa geedo geedo shinni ah (dhulka leh perlite 1x1), iyo soo-baxa caleen saddexaad oo runta ah oo lagu beddelay dhulka.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Dalagyada miraha 2019